Ajụjụ - Hebei TOP-metal m / E CO., LTD
API 5L PSL1 na PSL2 Iche maka Steel Line Pipe
API 5L akara anwụrụ (Enweghị nsogbu na welded anwụrụ) nke niile akara ule nwere PSL1 na PSL2 abụọ ngwaahịa nkọwa, ha dị iche iche na chemical mejupụtara, n'ichepụta Filiks, n'ibu ike, okpomọkụ omume, ule ndekọ, traceability wdg
Line ọkpọkọ na API 5L PSL2 dị elu karịa PSL1
PSL bụ obere aha nke ngwaahịa ọkọlọtọ larịị. The ngwaahịa ọkọlọtọ larịị nke akara anwụrụ nwere PSL1 na PSL2, nakwa na anyị nwere ike ikwu na àgwà ọkọlọtọ ekewa ke PSL1 na PSL2. PSL2 dị elu karịa PSL1, ọ bụghị nanị nnyocha ọkọlọtọ bụ dị iche iche, nakwa onye chemical onwunwe, n'ibu ike ụkpụrụ dị iche iche. Ya mere, mgbe ebe ahụ iji maka API 5L akara ọjà, na e kwuru n'ụzọ doro anya maka size, akara ule ndị a n'ozuzu nkọwapụta, nwekwara dokwuo anya na mmepụta ọkọlọtọ leve, PSL1 ma ọ bụ PSL2.
PSL2 ọzọ bụ nditịm karịa PSL1 na chemical Njirimara, ike ọdụdọ, na-abụghị na-ebibi ule, na mmetụta ule.
Dị iche iche mmetụta ule ụzọ PSL1 na PSL2
API 5L PSL1 ígwè akara anwụrụ bụghị chọrọ ime mmetụta ule.
Maka API 5L PSL2 ígwè akara ọjà, ma e wezụga mezuwo X80, ndị ọzọ niile na akara ule nke API 5L akara anwụrụ chọrọ mmetụta ule na okpomọkụ nke 0 ℃ . The nkezi uru nke Akv: longitudinal direction ≥ 41J, tranverse direction ≥ 27J.
Maka API 5L mezuwo X80 PSL2 akara ọjà, na 0 ℃ maka niile size, mmetụta nwalee Akv nkezi uru: longitudinal direction ≥ 101J, tranverse direction ≥ 68J.
Dị iche iche haịdrọlik ule maka API 5L akara anwụrụ na PSL1 na PSL2
Maka API 5L PSL2 akara anwụrụ ga-eme ndị haịdrọlik ule ọ bụla otu ọjà, na na API ọkọlọtọ nkọwapụta ekweghị ka nwere Non-ebibi ule dochie haịdrọlik ule, nka bu kwa ihe a nnukwu ihe dị iche n'etiti Chinese ọkọlọtọ na API 5L ọkọlọtọ. N'ihi PSL1-achọrọ Non-ebibi ule, maka PSL2 ga-eme ndị Non-ebibi ule ọ bụla otu ọjà.
Dị iche iche chemical mejupụtara maka API 5L akara anwụrụ na PSL1 na PSL2
Chemical mejupụtara na n'ibu ike bụkwa dị iche iche n'etiti API 5L PSL1 akara anwụrụ na API 5L PSL2 akara ọjà. N'ihi na zuru ezu nkọwapụta dị ka n'okpuru. API 5L PSL2 nwere mgbochi na carbon Ẹkot ọdịnaya, ebe maka carbon uka nta ukwuu karịa 0,12%, na hara ma ọ bụ ihe na-erughị 0,12%. Dị iche iche CEQ ga-etinyere. Maka akara anwụrụ na PSL2 ike ọdụdọ nwere kacha ókè. More info biko nyochaa API 5L nkọwapụta akụkụ 9.2 na 9.3.